Siyaasi Ka Tirsanaa Xukuumadii Madaxwaynihii Hore Ee Dalka Suda Camar Albashiir Oo Xabsiga La Dhigay – Bulsho News
Siyaasi Ka Tirsanaa Xukuumadii Madaxwaynihii Hore Ee Dalka Suda Camar...
Siyaasi Ka Tirsanaa Xukuumadii Madaxwaynihii Hore Ee Dalka Suda Camar Albashiir Oo Xabsiga La Dhigay
Siyaasi reer Sudan ah oo xubin ka ahaa golaha saree e dalka xukuma ayaa xabsiga loo taxaabay. Ehaladiisa ayaa sheegay in Maxamed Al-Faki Sulaymaan laga qabtay meel gurigiisa agtiisa ah oo ku yaal magaalo madaxda Kharduum.
Qabashadiisan ayaa daba socota laba siyaasi oo kale oo iyagana la xidhay todobaadkii hore. Saddexdaa siyaasi ba waxay muddo qiyaastii bil ah meel gaar ah lagu hayey markii uu dhacay af-gembigii Oktoobar. Waxaanay hore erayo kulkul isu waydaarsadeen hogaanka milatariga intii aanay talada la wareegin.
Xariga Maxamed Al-Faki Sulaymaan waxa la moodaa in uu caddayn u yahay in milatariga ay keligood gacanta ugu jirto talada Sudan oo ay ka go’an tahay in ay joojiyaan isbedellada ballaadhan ee shacabka loogu ballan qaaday.
Isaga iyo labada siyaasi ee kale ee todobaadkii hore la xidhay, waxay ka mid ahaayeen guddi loo saanay in ay xididada u siibaan shabakadda siyaasadeed iyo ta dhaqaale ee uu dhisay madaxweynihii hore ee keligii taliyaha ahaa ee Cumar Al-Bashiir.